I-China Vertical Vacuum Focus RF Machine abakhiqizi nabaphakeli | Ubuhle
Umshini Oqondile We-Focus RF Machine
I-Thermolift Focus RF ene-Vacuum Technology
Imvamisa ye-40.68 MHz RF yokuguga okulwa
I-Thermolift iyi-Radio Frequency Frequency (RF) eyingqayizivele, enhlobonhlobo yokwelashwa okungangenisi i-cellulite, ukuqina kwesikhumba kanye nokwakha umzimba- ngaphandle kwesikhathi sokuphumula.
Ubuchwepheshe be-UniPolar Pro obunamalungelo obunikazi obunikezwa i-Thermolift bunikeza abasebenza ukulawula okuphezulu kwezokwelapha ngokushintsha ngokungenamthungo phakathi kokushisa okuphezulu kwe-epidermis nokushisa okujulile kwamafutha angaphansi. Izindlela ezimbili ze-radiofrequency zihlanganisiwe kudivayisi eyodwa ukufinyelela kuzo zonke izingqimba zezicubu zomzimba.
Ngobuchwepheshe be-In-Motion TM, iThermolift uhlelo lokuqala lokunikeza ukuqina kwesikhumba okungenabuhlungu nokho okusebenzayo nokuqinisa umzimba.
Ubuchwepheshe obufanayo be-Thermolift be-impedance buletha amandla amakhulu we-RF ezicutshini. Ihlanganiswe nobuchwepheshe bokulawula ukujula okuyingqayizivele, amandla agxilwe endaweni engaphansi kwesikhumba, kushiya i-epidermis igcinwe. Kuphephile futhi kulula ukuyisebenzisa
Isimiso se-Vacuum Focus RF Machine
Izici zikaThermosharp iDielectric Heating- indlela eyingqayizivele lapho amandla aphezulu we-radiofrequency (RF) angama-40.68 MHz (athumela amasiginali ayizigidi ezingama-40.68 ngomzuzwana) adluliselwa ngqo kuzicubu, kubangele ukujikeleza okusheshayo kwama-molecule alo amanzi. Lokhu kujikeleza kudala ukungqubuzana okuveza ukushisa okunamandla nokusebenzayo. Ngoba isikhumba sakhiwe kakhulu ngamanzi, ukufudumeza okuvela kule ndlela kubanga ukusikeka komthamo ngaphakathi kwemicu ekhona yesikhumba futhi kukhuthaze ukwakheka kwe-collagen entsha ngenkathi kuthuthukisa ukushuba nokuqondaniswa kwayo. Imvamisa ephezulu ye-RF ivumela ukushisa okujulile, okukodwa okhiqiza imiphumela efanayo.
I-CNC isigqi sobuchwepheshe obubi
Langaphambilini Umshini wokuhlanza umzimba
Olandelayo: Kuqondile Physiotherapy Diathermy RET CET Umshini Umshini
Idivayisi encane ye-rf
I-Pink Metal 3D HIFU
Umshini ophathekayo weThermosharp